Umnumzana Walter Scott. Eminye yemisebenzi yakhe engaziwayo | Uncwadi lwangoku
Umzobo kaWalter Scott nguEdwin Henry Landseer.
mhlekazi UWalter scott wemka unaphakade ngosuku olufana nanamhlanje ukusuka 1832. Ke, kulo msitho mtsha wokudlula kwakhe, uphononongo ezinye imisebenzi encinci eyaziwayo yalo mbhali kwindalo iphela Ukuthandana, kunye nomsunguli we inoveli yembali.
1 UWalter scott
1.1 Inyaniso malunga needemon kunye namagqwirha
1.4 Umhlolokazi weentaba
1.5 Umtshakazi weLammermoor
1.6 Inyaniso yomfazi
UWalter Scott ulapha amaxesha amaninzi. Kwaye akumangalisi. Lo mbhali waseScotland, umbhali we Ivanhoe, Quentin Duward okanye uRob Roy, kunjalo enye yezona zidume kakhulu ngalo lonke ixesha. Kodwa namhlanje ndizisa ezinye izihloko engaziwa kangako ngomsebenzi wakhe wokuphonononga okanye wokuzifumanisa. Ngaba zezi:
Inyaniso malunga needemon kunye namagqwirha
Kuthunyelwe kuyo 1830. Yincwadi yezihloko ezinje ngezi iidemon, ubugqwirha kunye neminye imiba enxulumene ukusebenzelana nemimoya ngexesha Kwiminyaka ephakathi. UWalter Scott wayibhala ngexesha apho wayebeke khona iprozi kunye nomculo ecaleni kwaye wayenengxaki yamatyala. Ke kunokwenzeka ukuba yayiyimveliso nje yokulahla ezinye.
Su ifomathi yoonobumba Kwamvumela nokuba athethe ngabo ngombono ongaphezulu kofundisiso oluyinyani okanye uhlalutyo lwenjongo.
Ithunyelwe kwi 1821, le ngenxa ye yinxalenye yobomi be UJohn gow, ipirate eyaziwayo, kude kube ngoko, yayikhankanyiwe kuphela nguDaniel Defoe, kwaye kamva nguCharles Johnson kweyakhe Imbali ngokubanzi yezihange.
Yayiyiyo impumelelo kwezorhwebo kwangoko kwaye ikwaqwalaselwa njengelinye lamabali amakhulu eepirate ngalo lonke ixesha. Isakhiwo esipakishwe ngamanyathelo sijikeleze into yesiqhelo seRomaism thanda unxantathu phakathi kwamadoda amabini nomfazi.
Ithunyelwe kwi 1821, Ibhekisa ku Inqaba yaseKenilworth, KwisiNgesi saseWarwickshire. Kwaye uScott uzisa abalinganiswa bokwenene abaninzi ngenkulungwane ye-XNUMX kwisiqwenga sakhe. Ijolise kwi Umtshato Oyimfihlo kaRobert Dudley, Eyokuqala i-Earl yeLeicester, kunye no-Amy Robsart, ntombi kaSir Hugh Robsart. U-Amy ubalekela kuyise kunye nomlingane wakhe ukuba atshate i-earl kuba bobabini bathandana ngokunzulu.
Kodwa ubalo ludliwe ngu amabhongo yokunyuka kwenkundla kunye nokuphumelela uKumkanikazi uElizabeth I. Kungenxa yoko le nto kufuneka bawugcine uyimfihlo lo mtshato. Kodwa xa yonke into ifunyenwe kuya kuba semva kwexesha kuye intlekele elinde wena.
Ithunyelwe kwi 1827. Ubalisa ibali lika U-Elspat MacTavish, owaziwa njengoMhlolokazi Weentaba. Unyana wakho Hamish uqokelela phantsi komyalelo wakhe iqela labavukeli ukuba baququzelele ukukhusela loo mmandla ngokuchasene nabahlaseli baseFrance. Kodwa ubandakanyeka kuthotho lwe Amayelenqe ukuba uxuba umama wakhe, esacaphukile kukusweleka komyeni wakhe kwiimeko ezibuhlungu.
Ithunyelwe kwi 1819 ecaleni Intsomi yaseMontrose. Zombini ezi ncwadi ziyinxalenye yesithathu yolu ngcelele Iintsomi zomnini-mhlaba endiqeshisayo. Ikhokelela kuthi EScotland Ngexesha lolawulo luka-Anne I wase-Brittany, phakathi kuka-1702 no-1714. Kwaye kwakhona sineploti egcwele i amashwa wothando olungonwabisiyo phakathi kukaLucy Ashton kunye notshaba losapho lwakhe, uEdgar Ravenswood. UWalter Scott wathi lo msebenzi ubusekwe ezinye izehlo zokwenyani Yosapho lakwaDalerymple.
Lo ngumbongo oqukwe kwinoveli Otshatileyo, yapapashwa ngo-1825. Iyaqwalaselwa Owona mbongo ubalaseleyo nguWalter Scott. Beka ecaleni i ithoni yothando awayeqhele ukulubhekisa kwabasetyhini kwaye abonise enye mnyama kwaye ibaluleke ngakumbi, enokuthi mhlawumbi ibangelwe kukudana kothando.
Ukholo lomfazi nokuzithemba:
babhala abalinganiswa babo eluthulini;
zibaprinta ekukhanyeni kwenyanga,
nawo onke amagama akhawulezayo
iya kucaca, icace, ibengcono,
kwaye ngokusisigxina, ndicinga njalo,
kunokuba zithini iileta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Umnumzana Walter Scott. Eminye yemisebenzi yakhe engaziwayo
Imbali igcwele ngamanani amakhulu oncwadi afana noWalter Scott, khange ndibenalo uvuyo lokufunda imisebenzi yakhe emininzi, kodwa ndathi ndakufunda uMyeni ndaqonda ukuba usisigebenga soncwadi.